Freshsales: mitarika, misambotra, manakaiky, ary mitaiza ho an'ny orinasanao amin'ny sehatra fivarotana iray | Martech Zone
Ny ankamaroan'ny CRM sy ny sehatry ny fampidirana varotra ao amin'ny indostria dia mitaky fampidirana, fampifanarahana ary fitantanana. Misy taham-pahombiazana avo lenta amin'ny fananganana ireo fitaovana ireo satria manelingelina ny fikambanananao izany, mitaky ny mpanolo-tsaina sy ny mpamorona miasa matetika. Tsy lazaina intsony ny fotoana fanampiny takiana amin'ny fidirana angon-drakitra ary avy eo kely na tsy misy faharanitan-tsaina na fahitana momba ny dian'ny prospecta sy ny mpanjifanao.
Fresh Sales dia CRM varotra ho an'ny ekipa izay tsy te-hifanelanelana amin'ny fitaovana maro. Freshsales dia manome vahaolana fivarotana 360 degre amin'ny sehatra iray, hahafahanao:
mahasarika ny lalana mety amin'ny orinasanao
Engage amin'ny alàlan'ny touchpoints marobe
akaiky mifampiraharaha haingana kokoa
mikolokolo fifandraisana sarobidy.
Endri-javatra ny Freshsales Ampidiro
Contacts - fijerena 360-degre an'ny mpanjifanao miaraka amin'ny mombamomba ny fiaraha-monina sy ny toerana misy ny touchpoint tsirairay ao amin'ny efijery tokana izay nampanan-karena ny môtô fiara.
Score mitarika manan-tsaina - amboary tanana ny isa nataonao ary ampidiro ny faharanitan-tsaina artifisialy an'i Freshsales mba hitondrana laharana mifototra amin'ny asany sy ny mombamomba azy.
Fitantanana ny faritany - mamorona faritany mitovy amin'ny firafitry ny varotra ataon'ny fikambananao. Omeo automatique ny agents varotra sahaza ny mpanjifa mety.
Fanendrena, asa, fisie ary naoty - fandaharam-potoana fanendrena, manaova fanamarihana haingana, mizara rakitra ary miara-miasa amin'ny ekipa amin'ny asa.
Fampisehoana sary an-tsary ny varotra - araho ny fandrosoana amin'ny fifanakalozana misokatra amin'ny fomba fijery iray miaraka amin'ny fantsom-pivarotana fahitana azonao sivana sy alaharo. Mamorona fantsona maro (miditra, miditra, e-varotra sns). Ny interface dia ahafahanao mifandray amin'ny prospect mivantana avy amin'ny dashboard.
Fikarohana tranokala sy fampiharana - araho ny vinavinanao ary fantaro ny fifandraisan'izy ireo amin'ny tranokalanao na ny vokatra nomerika. Manomàna resadresaka mahaliana sy mifandraika ary ampiasao izany handrindrana ny isa ho an'ny cherry-pick the hot Leads.
Fizaram-potoana ho an'ny hetsika - mahazoa fomba fijery amin'ny fizotran'ny fotoana ataon'ny tsirairay prospect, amin'izay ny ekipan'ny varotrao dia afaka misafidy fotoana mety sy mifarana haingana kokoa.
Smartforms hitarika - raiso mivantana mankany amin'ny CRM ny tranokalanao. Mahazoa toe-javatra tsara kokoa noho ny Fresh Sales fitsidihana tranokala mipetraka an-toerana, mombamomba ny media sosialy, sns.
Tsindrio hiantso - tsy misy vidiny rindrambaiko / fikirakirana fanampiny. Mametraha antso fotsiny amin'ny tsindry iray avy ao anatiny Fresh Sales mampiasa ny telefaona natsangana - miaraka amina antso miditra sy ivoahana rehetra voasoratra ho azy. Ataovy manokana ny feonao sy ny hafatra arahinao.
Android sy iOS Mobile App - mahazoa fomba fijery 360 ° an'ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny fampiharana Freshsales Android sy iOS.
Tatitra momba ny hetsika ho an'ny antso ivelany - fantaro hoe firy ny antso an-tariby azon'ny mpivarotra isak'asa mandritra ny fotoana voafaritra.
Alefaso ary araho ny mailaka - mandefa na mandray mailaka avy amin'ireto Fresh Sales na ny mpanjifanao mailaka, ary tadiavo ny mailaka ao amin'ny fampirimana Sent na Inbox an'ny fampiharana roa. Mandefasa mailaka marobe amin'ny alàlan'ny modely namboarina ary araho ny fanatontosana azy amin'ny fanarahan-dia fanentanana. Mahazoa fampandrenesana amin'ny fotoana tena izy amin'ny fisokafan'ny mailaka sy ny tsindry, ary alamino ny dingana hataonao manaraka. Ampiharo ny DKIM ho an'ny mailaka nosoniavina nomerika mba hanatsarana ny fitaterana.
Fanentanana momba ny workflows sy ny varotra - Ataovy mandeha ho azy ny asa miverimberina, mandrindra ny fizotrany ary mahaiza mamokatra amin'ny alàlan'ny alàlan'ny asa aman-draharaha manan-tsaina. Manamboara sy manara-maso ny fampielezana mailaka miorina amin'ny fitsipika handefasana mailaka natokana ho anao. Mandrisoa hetsika mandeha ho azy miorina amin'ny fihetsik'izy ireo.
Tatitra momba ny varotra sy vinavina - Mampiasà tatitra mahazatra na mamorona tatitra manokana mba hisintonana izay angona avy ao amin'ny CRM. Azonao atao ihany koa ny mandahatra sy manondrana tatitra ary mizara azy ireo haingana amin'ireo ekipanao. miaraka tsingerin'ny varotra sy ny hafainganana tatitra, azonao atao ny mamantatra hoe mandra-pahoviana ny ekipa manao fotoana akaiky. Fantaro ireo dingana ampiasain'ny soloanao ny ankamaroan'ny fotoanany amin'ny tsingerin'ny varotra.
Dashboards - jereo ny tatitra marobe ao amin'ny efijery tokana misy tsipika fampifanarahana mivantana azo ekena. Araho ny satan'ny varotrao amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fandaharam-potoana sy ny safidy fanondranana.
Fifindra-monina sy fampiraisana - Fanafarana angon-drakitra iray mirona sy haingana kokoa avy amin'ny Salesforce, Zoho CRM, Insightly, Pipedrive, Salesforce IQ, na CSV fotsiny. Ampifandraiso amin'ny Fresh Chat, Freshdesk, G Suite, Segment, Outlook, Zapier, fifanakalozana, Hubspot, Mailchimp, Office, miaraka amina fampidirina bebe kokoa novokarina!
Multilanguage - Fiteny 10 izao no ampiharina hanohanana ny toby mpanjifa manerantany.
mifanaraka tsara - Nampiantrano tany Etazonia tao amin'ny foibe angon-drakitra mifanaraka amin'ny ISO 27001, SSAE16, ary HIPAA. Ny fampiharana ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo dia voamarina TRUSTe ary mifanaraka amin'ny GDPR.
Misorata anarana amin'ny kaonty Freshsales maimaim-poana
Fambara: izaho dia Fresh Sales Affiliate.
Tags: 360 diplaomaaifahaizana artifisialymailaka betsakaCRMfifindra-monina crmmailaka MarketingFresh SalesHIPAAscoring firakafiteny marofitantanana fampielezana varotratsingerin'ny varotraFanamafisana ny varotrafivarotana mialohafantsom-pivarotanatatitra momba ny varotrahafainganam-pandehavarotra mandeha ho azy automatiqueSSAE16
Ny Checker amin'ny fitsipi-pitenenana tsara indrindra ho an'ny bilaogy, mailaka, finday ary media sosialy
Oribi: Analytics tsy misy kaody Marketing miaraka amin'ireo valiny ilainao hampitombo ny asanao
Midira ao amin'ny Community
Saram-pisoratana indray mandeha ho an'ny fidirana amin'ny tranokala amin'ny forums sy votoaty ary tolotra premium. (USD)
Kara-trosa arahana: American Express, Discover, MasterCard, Visa
Nomeraon-karatra Month010203040506070809101112 taona20212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040 Daty farany Kaody fiarovana Anaran'ny tompon-karatra